Shiinaha Hydroponic Grow Tent 600 D Oxford In ka badan 95% Warshada Kobaca Mylar Growth iyo alaab-qeybiyeyaal | Virex
Bacda Caleenta PP
120*60*150 CM Tobanka Kobaca ugu Wanaagsan...
Kori Sanduuqa Teendhada 90*60*90 CM F...
150*150*200 CM Grow Tent Gr...
80*80*160 CM Kori Teendhada Hyd...
40*40*120CM Kori Teendhada Hydr...
Teendhada koritaanka Hydroponic 600 D Oxford In ka badan 95% Teendhada Kobaca Mylar
VIREX wax soo saarka ugu weyn ee hydroponic beeraleyda koraan teendho 600 D oxford iyo in ka badan 95% milicsiga Mylar. Waxaan ku takhasusnay beerta guriga sanado badan, oo daboolaya inta badan suuqyada Yurub iyo Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono lammaanahaaga muddada-dheer ee Shiinaha.
VIREX Grow Tent wuxuu ka samaysan yahay dhar cufan oo 600D ah oo Oxford ah oo ay ku dahaadhan tahay PET Mylar oo qalin ah oo leh heer ka tarjumaysa in ka badan 95%. Qalabka teendhada culus, xoojinta birta dahaarka cad, tii ABS culus ee madow, badbaadada iyo xasilloonida.
Waxay leedahay tafaasiil kaamil ah, si sahlan oo laga soo galo d-qaabaynta albaabka, hawo buuxda, siib caag laba jibaaran oo waara. Meelo badan oo labajibbaaran ayaa loo isticmaali karaa in lagu xareeyo filtarrada iyo marawaxadaha. Shaandhooyin cadcad waxa loogu talagalay inay ka caawiyaan wareegga hawada oo ay makhluuqa kale ka ilaaliyaan teendhada koraysa.
Qalabka Teendhada Koritaanka VIREX waxaa ka mid ah: deyrka, saxaarad sagxeedka biyuhu aanay ka bixi karin, iyo tilmaamaha rakibaadda.
Way fududahay in la rakibo oo uma baahna qalab, kaliya hubi in dhammaan cagaha caaggu ay u jeedaan isla jihada. Qolalka hydroponic sidoo kale way fududahay in la kala diro si loo nadiifiyo ama loo raro.
VIREX Grow Tents waxaa lagu habeyn karaa cabbir ahaan, midab, daaqadda daawashada, astaanta, sanduuqa qalabka iyo in ka badan. Bixi adeegga iibka ka dib ee VIREX teendhooyinka koraan. Marka aad la kulanto wax dhibaato ah, fadlan la xidhiidh kooxdayada adeegga iibka ka dib taageeradayada.
1. Qalabka: 600D Oxford ka kooban filimka aluminium hadhuudh ah (600D dhumucdiisuna waa 0.35mm)
2. Birta Tube: Bir dahaarka cad TUBE D16 * 0.6mm (midabka waa la beddeli karaa)
3. Qalabyada: Qalabka birta ee ABS ee culus
4. gees duubka: cidhifka duubista cagaaran (midabka la habeeyey)
5. Cabbirka daloolka hawo-qaadista: 4/6/8/10 inji
6. Sifee cabbirka daaqadda: 45*13.5cm shaashadda daaqadda shaandhada cad
7. Saxaarada biyaha: balastar laba-dhinac madow oo go'an
8. Xarig godka hawo-qaadista: xadhig madow PP
9. Zipper: Cabbirka madow 10 jibbaar
Magaca Alaabta VIREX Grow Teendhada
Nooca Beerta cagaaran
iwm.(Xajmiga gaarka ah)
Qalabka Teendhada 600D Dharka Oxford Iyo in ka badan 95% Milicsiga Mylar
Xidhiidhiyayaasha ABS caag ama geeso bir ah
Qalabka Frame D16mm * T0.6mm Bir Rinjiyeynta Cad Cad
1.Waxaan ku siin OEM / ODM ah.
2.Waxaan aqbalnaa amarka yar.
3.Waxaan bixinaa nidaamka adeegga iibka kadib.
4.Dhammaan alaabtayadu waxay si taxadar leh u tijaabin doonaan waaxdayada QC si loo hubiyo tayada heerka sare.
Q1: Miyaad astaysto calaamadda, baakadaha iyo naqshadeynta alaabtaada?
J: Haa, waxaanu bixinaa OEM/ODM
Q2: Sidee loo hubiyo tayada?
A: Kooxda kormeerka tayada alaabta xirfadeed ayaa dammaanad qaadaya heerka cilladaysan ee amarrada; Haddii kale, waxaan si buuxda u qaadi doonaa mas'uuliyadda sida waafaqsan nidaamka taageerada iibka ka dib.
Q3: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
J: Guud ahaan, 30% waa in ay bixiso T/T halka 70% soo hartayna waa in la bixiyaa ka hor inta aan la rarin.
Q4: Waa maxay awooddaada wax soo saarka bishii?
A: Awoodda wax soo saarka ee warshadeena waa 10000 set oo ah teendhooyin koraan bishii.
Wararkii Ugu Danbeeyay:
Huizhou Virex Technology Co., Ltd waxay soo saartey 10,000 oo teendho koraan si loogu dhoofiyo suuqa Maraykanka bishii Sebtembar. Teendhooyinkeena koraan waa kuwo caan ah. Hadda dad aad u tiro badan ayaa isticmaala teendhooyin ay ubax iyo dhir ku beertaan guriga.
Waxaa la arki karaa in heerka nolosheenna uu si joogto ah u soo hagaagayo iyadoo sidoo kale ay kor u kacday hab-dhaqanka dadka ee nolosha. Waxaan aaminsanahay in dad badan ay wax ka baran doonaan beerta guriga oo ay isticmaali doonaan alaabta guriga lagu koriyo.
Hore: 2 In1 Grow Tent 600 D Sanduuqa Koritaanka Guriga ee Warshada Mylar ee Milicsiga Sare
Xiga: Saqafka Cube Koritaanka Teendhada Kulul ee Biyaha Caan ka ah ee Albaabada Koraaya Teendhada Buuxa
60x60x120 CM Kobaca Teendhada Lahaboon ee Sanduuqa Kobaca Ga...
Kori Sanduuqa Teendhada 90*60*90 CM Qiimaha Warshada Qolka Cagaaran
40*40*120 CM Koritaanka Teendhada Hydroponic Warshada
120*60*150 CM Teendhooyinka Koritaanka Teendhada ugu Wanaagsan
150*150*200 CM Koritaanka Teendhada koriinka
2 In1 Grow Tent 600 D Milicsiga Sare ee Mylar Fac...